site ha na 20-01-16
“Nye m otu fulcrum, m ga-ebulikwa ụwa. - Archimedes. Nye gị ụkpụrụ, gịnị ka ị ga-ejide? ” Onye ọ bụla maara ikike dị elu nke ụkpụrụ nke usoro ihe eji arụ ọrụ. Olee otú o nwere ike ịbụ? Anyị na-eji data ekwu okwu. 1. Standard loading ngụkọta oge A na-ekewa ngwa ngwa B ka ...
Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd eguzobewo usoro mmekọrịta ya na Mahadum Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ ebe 2004 ma guzobekwa otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị siri ike iji nyochaa usoro nyocha miri emi maka emetụta mkpọchi disk na-akwado ihe nchekwa. Ogologo nke cantilever ...
Kedu usoro mmepụta na Rapid Scaffold, site na ihe onwunwe ruo ngwaahịa ikpeazụ? 1. Drawings Drawings bụ nzọụkwụ mbụ maka imepụta, yana kwa ihe kachasị mkpa. Ha gụnyere ndị a: a. Ndị ndị ahịa ahụ wepụtara; b. Ndị mere dị ka ihe atụ, nkọwa ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ ...